पहिला हामी जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउँछौ, अनि मात्र कर लिन्छौ-मेयर खाँण – newslinesnepal
फाल्गुण १८ गते विराटनगरमा भरतमोहन स्‍मृति सभा गरिदै⚡राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालका विषयमा छलफल⚡विभिन्न समूहमा छरिएका पूर्व माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवस मनाउने⚡नवनियुक्त राजदूत रेग्मी र चेम्वर पदाधिकारीहरु बीच द्धिपक्षीय आर्थिक सम्वन्ध अभिवृद्धि बारे छलफल⚡हेर्नुहोस् आज २०७७ साल फागुन १३ गते, विहिबारको राशिफल⚡दल र देश”को भिडियो सार्वजनिक : राजनितिक विकृतिमाथि कडा प्रहार⚡ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम अत्यन्तै उत्साहजनक : न्यौपाने⚡हाप्किडोको चौथो राष्ट्रिय च्याम्पियसिप बैशाखको पहिलो साता⚡दीपक प्रिक्वाटरफाइनलमा⚡आज थप ११० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
पहिला हामी जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउँछौ, अनि मात्र कर लिन्छौ-मेयर खाँण
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार १३:१०
संसारकै नमुना सहर बन्दै वालिङ्, हेर्नुस मेयर कस्तो हुनुपर्छ ? योजना कस्तो हुनुपर्छ ?
काठमाडौं- देशभरका स्थानीय सरकार अन्योलमा छन् । प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले आवश्यक नीति तथा नियम नबनाएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ ।स्थानीय सरकार गठन भएको पनि १ वर्ष बढी भईसक्यो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले यो अवधिमा जनतामाथि करको भार थोपरेको भनेर आलोचना भईरहेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि जनताले राहत पाउने विश्वास गरेका थिए । तर, त्यसको ठीक विपरित स्थानीय सरकारले विकासको नाममा डोजर चलाउने र कर असुल्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । जनताको आयस्तरमा बृद्धि भएको छैन, तर कर भने बढाईएको छ । करको भार अत्याधिक बढेका कारण जनता आक्रोशित पनि बनेका छन ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा बोकेको सरकारसँग देशभर १३ वटा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना पनि छ । स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही काम हुन सकेको छैन । सरकारले अझै स्मार्ट सिटीको मापदण्ड समेत तयार पार्न सकेको छैन ।
तर, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका भने अबको ५ वर्ष भित्रै स्मार्ट सिटी हुने भएको छ । वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलिपप्रताप खाँणका अनुसार वालिङ नगरपालिका स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेजको अवधारणामा गईसकेको छ ।
कसरी बन्छ वालिङ स्मार्ट नगरपालिका ?
कानून : वालिङ नगरपालिकाका मेयर खाणका अनुसार नगरपालिकाले सर्वप्रथम सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानून तयार गर्यो । लगानी भित्र्याउने र लगानी सुरक्षा गर्ने कानून तयार गर्यो । उत्पादन तथा बजारमा स्थानीय सहभागिता बढायो । तिनै कानून तथा नीतिको आधारमा रहेर वालिङले आफुलाई स्मार्ट नगरपालिकाको मार्गमा अगाडि बढायो ।
प्रविधिः खाँणका अनुसार वालिङ अहिले आईओटी प्रविधिमा गएको छ । अर्थात इन्टरनेट अफ थिंग्स । आईओटी अवधारणा अनुरुप अब वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित कुनैपनि काम गर्नको लागि नगरपालिका कार्यालय र वडा कार्यालय पुग्नु पर्दैन । यसकोलागि घरैमा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट नगपालिकाको काम गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले भदौ १५ गतेबाट नगरपालिका एप्स पनि सार्वजनिक गर्दैछ ।
नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर, नगरपालिका वा वडा कार्यालयबाट जनताले गर्नुपर्ने कुनैपनि कामका लागि अब कार्यालय धाउनु पर्ने छैन ।
नगरपालिकाले इनोभेसन सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ । इनोभेसन सेन्टरले नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री र स्मार्ट बनाउने छ । इनोभेसन सेन्टरमार्फत नगरपालिकाको क्षेत्र भित्रको पिउने पानीको शुद्धता मापन गर्ने, सडक तथा सरकारी कार्यालयमा सेन्सर जडित बत्तीको काम भईरहेको छ । सेन्सर जडित बत्ती भनेको मानिस आएपछि आफै बल्ने र मानिस नभएपछि आफै निभ्ने गर्छ ।
यस बाहेक नगरपालिकाले इनोभेसन सेन्टरमार्फत नै कुचो लगाउने, भाँडा माझ्ने र सडक सफा गर्ने रोबट पनि तयार गरेको छ । इनोभेसन सेन्टरका लागि नगरपालिकाले भारतबाट प्रविधि मगाएको थियो । खाँणका अनुसार यो प्रविधि हस्तान्तरणको काम पनि भईरहेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका स्कुल तथा कलेजमा ८, ९, १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी र विज्ञान शिक्षकलाई यो प्रविधि सिकाउने काम भईरहेको छ ।
प्रविधि हस्तान्तरण र प्रविधिको प्रयोगका लागि नगरपालिकाले विदेशमा रहेका वालिङवासीको सहयोग लिएको खाँणले बताए ।
उद्योग, लगानी र कर
नगरपालिकाले ५ वटा औद्योगिक क्षेत्र तयार गरेको छ । नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन पनि गरिसकेको जानकारी खाँणले दिए । नगरपालिकाभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरुलाई नगरपालिकाले सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरेको खाँडले बताए । र, लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाको जिम्मा पनि नगरपालिकाले नै लिने गर्छ ।
नगरपालिकाले तयार गरेका ५ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको खाँणले बताए । यसबाहेक नगरपालिले पतञ्जलीका लागि ३५ सय रोपनी जग्गा पनि छुट्याएको छ । पतञ्जलीले वालिङ नगरपालिकामा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको पनि खाँणले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले अहिले कर बढाएको छैन ।
‘पहिला हामी जनतालाई कर तिर्न सक्षम बनाउँछौ’ खाँणले भने ।
लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्नको लागि नगरपालिको कर छुट दिएको छ ।
नगरपालिकाको मूख्य क्षेत्र स्मार्ट सिटी हुनेछ । गाउँहरु स्मार्ट भिलेज हुनेछन् । ३ सय १० वटा गाउँ रहेको वालिङ नगरपालिकाले एक घर एक उद्यमको योजना बनाएको छ । गाउँले उत्पादन गर्ने र सहरले उत्पादन खपत गर्ने योजना बनाएको खाँणले बताए ।
लगानी गर्न नसक्ने वालिङवासीको लागि नगरपालिका स्वयम्ले लगानी गर्ने गर्छ । नगरपालिकाले केही विउपुँजी रकम दिएर लगानी गर्न लगाउने गरेको खाँणले जानकारी दिए । ठूलो लगानी गर्नुपर्दा नगरपालिका आफैं बैंक ग्यारेन्टी बस्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
नगरपालिकाभित्र रहेका उद्योग तथा व्यवसायको बीमाको काम पनि नगरपालिकाले नै गर्ने गर्छ ।
वान कलर, वान प्रोडक्ट
नगरपालिकाले आफूलाई वान कलर क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दैछ । वालिङ बजारमा गुलाबी रंग (पिंक) लगाईएको छ भने गाउँमा अन्य कलर लगाईनेछ । २ वर्ष भित्र वालिङ नगरपालिकालाई वान कलर क्षेत्र बनाईसकिने छ ।
वान कलर क्षेत्र बनाउनको लागि वालिङले देशभर रहेका रंग उत्पादक कम्पनीसँग छलफल गरेर ५० प्रतिशत छुटमा कलर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । वान कलर वान प्रोडक्ट अन्र्तगत एउटा गाउँमा एउटै कलर लगाईनेछ । एउटा गाउँबाट एउटै वस्तु उत्पादन गरिनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रलाई शून्य फोहर क्षेत्र बनाईएको छ । नगरपालिकामा उत्पादन हुने फोहोरलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले प्रत्येक ५० घरधुरी समेटेर फोहोर व्यवस्थापन समिति बनाएको छ ।
नगरपालिकामा उत्पादन हुने फोहोरबाट नगरपालिकाले जैविक मल बनाउने गर्छ । मल बनाउन नमिल्ने फोहोर बिक्री गरेर नगरापालिकाले वार्षिक ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको खाँणले जानकारी दिए । यसरी आम्दानी भएको रकमको ४० प्रतिशत रकम फोहोर व्यवस्थापन समितिलाई दिने गरिन्छ । फोहोर व्यस्थापन समितिले आफूले पाएको रकमबाट सडकका खाल्टा पुर्ने, ढल तथा नाला व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि नगरपालिकाको बजेट ७० करोड रुपैयाँ छ । थोरै बजेटमा पनि नगरपालिकाले आफूलाई स्मार्ट बनाउने तयारी गरेको छ । स्मार्ट नगरपालिकाका लागि नगरपालिकाले पिपिपि मोडल तयार गरेको छ । पिपिपि मोडलको परामर्शदाताको रुपमा भि रक कम्पनी नियुक्त गरिएको छ ।
८० हजार जनसंख्या रहेको नगरपालिको तयार गरेको औद्योगिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रबाट १९ हजार जनालाई रोजागरी प्रदान गर्न सकिने कार्ययोजना बनाएको खाँणले बताए ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको सिलिकन भ्याली कम करका कारण विश्वमै चर्चित छ । जसका कारण सिलिकन भ्यालीमा विश्वभरका लगानीकर्ताको ओइरो लाग्ने गर्छ । यही अवधारण वालिङल ेपनि अपाउने भएको छ ।
‘हामीसँग भ्याली छैन, पहाड छ, त्यही भएर अब हामी सिलिकन हिल्सको तयारीमा छौ,’ खाँणले भने ।
सरकारले सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा कर बढाएको छ । तर, वालिङ नगरपालिकामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वालिङलाई धेरै कर तिर्नु नपर्ने बताउँछन् खाँण ।
संघीय सरकारलाई तिरेको कर पनि नगरपालिकाले लगानीकर्तालाई फिर्ता दिने बताए खाँणले । अर्थात, स्थानीय सरकारमार्फत उठेको करको केही अंश संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै फिर्ता गर्छ । यसरी फिर्ता गरिएको कर लगानीकर्तालाई नै फिर्ता गरिनेछ ।
साहसिक खेलकुदमा पनि वालिङ नगरपालिकाले आफुलाई अग्रसर बनाएको छ । नगरपालिकाले १ सय किलोमिटर माउन्टेन बाईक रुट समेत घोषणा गरिसकेको छ । यसबाहेक नगरपालिकाले प्याराग्लाईडिङ सुरुवात गर्नको लागि नगरपालिका क्षेत्रलाई नो फ्लाईट जोन घोषणा गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
शासक होइन, समन्वयकर्ता
देशभरका स्थानीय तहले संघीय सरकारले प्रदान गरेको बजेट कम भयो भनेर रोईलो गरेकोमा खाँण चिन्तित छन् ।
‘हामी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहितको स्वतन्त्र सरकार हौं, एकातिर हामी स्वतन्त्रता पनि खोज्ने अनि संघीय सरकारले पैसा दिएन भनेर पनि गुनासो गर्न त कहाँ पाईन्छ र ?’ खाँण फेरि थप्छन्– स्वतन्त्रता र पैसा एकैचोटी पाईने कुरा होइन ।
संघीय सरकारले जति थोरै पैसा दियो त्यति स्थानीय तह उत्तरदायी हुने खाँडको धारणा छ । संघीय सरकारले धेरै पैसा दियो भने स्थानीय सरकार पराधीन हुने खतरा रहेको बताउँछन् खाँड । स्थानीय सरकारले कर बृद्धि गर्नुको साटो जनतालाई कर तिर्न योग्य बनाउनु पर्नेमा खाँणको जोड रहेको छ ।
‘जनतासँग कर तिर्ने पैसा छैन भने कर बढाएर मात्रै हुन्छ ?’–खाँण प्रश्न गर्छन् ।
५ वर्षभित्रै वालिङ स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेजसहितको स्मार्ट नगरपालिका बन्नेमा खाँण विश्वस्त छन् ।
‘हामी देशकै पहिलो स्मार्ट नगरपालिका बन्छौं, हामी शासक होइनौं, हामी त समन्वयकर्ता हौं, जनताको, जीवनस्तर उकास्न, आम्दानी बढाउन र सोचाईकोस्तर बढाउन हामीले समन्वय गर्ने हो,’ खाँण भन्छ
राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालका विषयमा छलफल
विभिन्न समूहमा छरिएका पूर्व माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवस मनाउने
हेर्नुहोस् आज २०७७ साल फागुन १३ गते, विहिबारको राशिफल